Sebehlinzekwe ngogesi abaseMizamo Yethu | News24
LAST UPDATED: 2018-11-15, 12:52
Sebehlinzekwe ngogesi abaseMizamo Yethu
Cape Town – Idolobha laseKapa selihlinzeke imindeni engu-355 ngogesi eMizamo Yethu e Hout Bay, ngoLwesihlanu.
Ngesitatimende esikhishwe yiMeya uPatricia de Lille uqashwe izakhamuzi ezingu-18 zakule ndawo ukuba yingxenye yalabo abazokwenza umsebenzi wokuxhuma ugesi kule ndawo.
Lolu hlelo luyingxenye yezinhlelo ezinkulu zalo masipala zokuthuthukisa izakhamuza zakule ndawo ngezinsiza ezifana nokubahlinzeka ngamanzi, ugesi, ukuthuthwa kwendle kanye nokwakhiwa kwezindlela zokuhamba ezivulelekile.
OLUNYE UDABA:IPrasa isiphinde yaqoka ibamba lesikhulu esiphezulu eminyakeni emibili
Le Meya ithi ukuvulwa kwezindlela kanye nokwakhiwa kwemigwaqo kozosiza umasipala ngisho nabezimo eziphuthumayo bakwazi ukufinyelela kulezi zakhamuzi ngokushesha. “Kuyimpumelelo emkulu lokhu esikuzuzile ngalo msebenzi nowube yimpumelelo ngokusebenza ngokubambisana nomphakathi kanye nabaholi bawo,” kusho uDe Lille.
Izakhamuzi zaseMizamo Yethu zabamba imibhikisho embalwa kusukela ngoMashi, kwashiswa izindawo ezimbalwa becasulwa wukuthi uMasipala uhudula izinyawo ekuletheni intuthuko kubona.
Ngenyanga kaJulayi lemibhikisho yaqina kakhulu futhi kwaba nodlame olungalawuleki izakhamuzi ziqhubekile nokushisa.
Lo mbhikisho waze waphela lapho izakhamuzi ziba nesivumelwano nomasipala ngokuthi uzozama ukusebenza ngokushesha ukuletha intuthuko.